Ny lamaody fohy ny lamaody vehivavy - jeans, fanatanjahan-tena, tora-pasika, misy tavy, tery, rovitra, mainty, fotsy
Ny fehiloha fohy dia zavatra iray ilaina ho an'ny gara vehivavy, izay manome fampiononana amin'ny fitafy ary manome fahafahana hanangona tsipìka mahaliana. Ity vanim-potoana ity, ity dia iray amin'ireo fironana malaza indrindra, izay aseho amin'ny dikan-teny samihafa.
Iza no fohy fohy?
Ny paosin'ny lamaody lamaody dia tsy mahavidy ny firaisana ara-drariny. Ny zava-misy dia ny halavan'ny tongotra kely maivana indrindra, noho izany dia tsy hikolokolo ilay endrika ny fingotra kely ambany amin'ny tendany fohy, nefa ataovy tsy mahasarika. Na dia izany aza, ny ankizivavy manana tongotra mahafinaritra dia tsy maintsy mipetrapetraka ao anaty modely tsy voatanisa, mba hampifaliana ny hafanam-pon'ny hafa.
Saingy ny tena zava-dehibe dia ny ankamaroan'ny vehivavy no mipetraka, saingy zava-dehibe ny manaiky ny endriky ny lalàm-panorenana:
Ny vehivavy manana endrika pòm dia soso-kevitra ny hanana tandroka manify izay manalavitra ny faritra misy olana ary manolotra ny tavy.
Ny mods, miaraka amin'ny sorony mitongilana eo amin'ny andilany, dia aseho amin'ny endrika maotina amin'ny endriny miloko matevina.
Ny felana volometika dia mampihena kely ny fivalanan-kirany miaraka amin'ny fikotrokotroka amin'ny tendrony amin'ny karazana Bermudes .
Miankavia amin'ny endriny miaraka amin'ny shorts fohy
Shorts fohy amin'ny ankizivavy feno
Famaritana fohy - lohahevitra mampiady hevitra ao amin'ny pyshechek garderobe. Ny hatsaran-tarehy sasany dia tsy mihevitra fa mahamenatra ny mampiseho ny hafetsen'ny akanjo toy ny fihantsiana, amin'ny fientanentanana amin'ireo izay resy lahatra amin'ny tsy fankasitrahana an'ity karazana zavatra ity amin'ny vatana manontolo. Ary raha mizarazara ianao ao amin'ny sokajy voalohany, mba tsy hijerena ny tsy hita maso, dia eritrereto maromaro maromaro amin'ny fisafidianana shorts fohy ho an'ny pysachek ao anaty rano.
Ireo tsotra dia tsotra:
Ny lava tsara indrindra ho an'ny vehivavy feno dia 10-12 cm ambonin'ny lohalika, eo amin'ny antsasaky ny feny. Ao anatin'ity modely ity dia tsy hita maso ny sela cellulite matetika.
Mini mini-mini-tavoahangy mahazatra ho an'ny fombafomba miaraka amin'ny endrika haitraitra.
Ny halavan'ny pataloha dia fitsipika manan-danja amin'ny safidy. Ny fehiloha fohy amin'ny tongotra feno dia hisarika ny saina ho amin'ny habetsahana tafahoatra ao amin'io faritra io. Noho izany, tsara kokoa ny manolotra safidy amin'ny vokatra misy pataloha kely.
Amin'ny kibo feno, tsy tokony hifidy modelina miaraka amin'ny tavy ambany ianao, izay hanampy amin'ny fanamafisana ny vala amin'ny kibo.
Ny trim-bidy lehibe dia tsy mandray anjara amin'ny lanjany be loatra, noho izany misoroka ny poti-be ambony, tsipìkana, embroidery, patch sy printy.
Fashion short shorts
Fomba hafa mahaliana amin'ny akanjom-bolo madinika, mipetaka ny nosy manokana ao amin'ny poketran'ny vehivavy. Manome fahalalahana bebe kokoa izy ireo, ary tsy ilaina ny manamarina fa ny halam-pandehanana dia tsy mandeha ambony noho ny mendrika. Ankoatr'izay, ny fivalanan-damba fikarakarana ny lamaody dia manondro tsara ny teboka fahadimy sy ny tongony matevina. Izy ireo dia miantso ny akanjo amin'ny fotoana rehetra - amin'ny tsipìka andavanandro , amin'ny fanofanana ara-panatanjahantena ary na dia ho an'ny sarin'ny klioba aza.
Amin'ity vanim-potoana ity dia mahaliana sy tsy trivial ny karazam-pirazanana. Ankoatra ny karazana nentim-paharazana, izay tsy manary laza (ohatra, denim na modely ara-panatanjahantena), dia misy ireo fiovana ireo:
Skirt-shorts - lamaody mamirapiratra, izay nahazo ny fon'ny vehivavy tamin'ny fahatsaran'ny lamaody.
Ireo fehiloha fohy ireo dia tsy maintsy ilaina ihany koa amin'ity taona ity.
Modely amin'ny fanatanjahantena, ampiasaina tsy ho an'ny fampiofanana, fa koa ho fototra ho an'ny tongolobe amin'ny fomba fanatanjahantena.
Nandritra ny vanim-potoana maromaro nifanaovan'ny Jeans dia nipoitra tsikelikely avy amin'ny lamaody ny lamaody, fa ny lohataona ho avy kosa dia namerina ny toerany. Ireo mpanakanto manana zotom-po roa dia mamorona fanangonana mahaliana izay tsy ahafahan'ny mpivady atao hoe mahazatra sy mampihomehy:
Mbola eo an-dàlam-pandinihana ny modely misy hadisoana sy fahadisoana.
Modely amin'ity taona ity, ny hatsembohana mamirapiratra dia azo ampiharina amin'ny jeans. Amin'ny safidy - appliqués sy patches.
Ny mahaliana dia ny tsy fisian'ny fonosana amin'ny pataloha miaraka amin'ny kavina, toy ny hoe avy amin'ny kiraro tena.
Safidy tsy dia mafana loatra - ny endriky ny karana, ny pesta sy ny dantelina.
Ny ankizilahy dia mbola manan-danja, miaraka amin'ny tsindry mahazatra.
Karazana fehiloha misy tavy ambony
Trangan-javatra mahaliana iray izay tonga taminay avy amin'ny taona 80 sy 90, niverina indray! Efa nanary ny fahazarana manao akanjo sy pataloha eo ambonin'ny elatra isika, fotoana izao hahatsiarovana azy ireo. Ity modely ity dia ahafahanao manafina ny kibon'ny rivotra ary manitatra ny tongotra, izay zava-dehibe ho an'ny zazavavy manana fitomboana ambany. Ny fitaovana izay misy fehiloha fohy miaraka amin'ny tombo-kavoana avo be, ny fahasamihafana indrindra:
Ny karazam-pirazanana sy ny karazam-pirazanana izay hametrahana ny modely amin'ny tandroka manify, dia hamela mody faka tahaka ny modely mety. Ho an'ny sary manjavozavo, ny vokatra miaraka amin'ny bokotra mahazatra na miloko fehikibo marefo dia tsara. Jeans dia tsara ho an'ny isan'andro. Misy fehiloha fehiloha na tweed dia mety ampiasaina amin'ny cajun raharaham-barotra.
Short shorts fanatanjahan-tena
Ny modely mora ho an'ny fanatanjahan-tena dia tena tsara ho an'ny fanatanjahantena mandritra ny fahavaratra, raha toa ka mihoatra ny antsasak'adiny ihany no hanelingelina azy. Ny halavan'ny mini dia fomba lehibe hanehoana ireo voankazo podkachennye manodidina tsy misy tavy mena. Ny iray amin'ireo modely malaza dia feso miaraka boribory boribory eo amin'ny elatry ny pataloha sy tsanganana mahaliana. Ny fikojakojana ara-panatanjahantena ho an'ny tovovavy dia vita amin'ny landihazo, kiraro, polyester, plastika, velvet. Mampiasa haingon-trano amin'ny endriky ny latabatra, paompy fitaterana, tsy mety. Ny endriky ny loko dia aseho amin'ny tonony matroka sy ny loko mamirapiratra.
Short shorts short
Raha tompon-trano falifaly ianao na mpanao sary sokitra na sariaka fanatanjahan-tena, dia sahy manamboatra ny efitranonao miaraka amin'ny modely maotina. Marina fa voafetra ny habetsahan'ny akanjo toy izany: Azo atao tsara ny manao fanatanjahan-tena, na mandeha an-tongotra na miala voly. Ny modelim-bolo mendrika dia tsara ho an'ny mampiaraka, manangom-bokatra na mivory amin'ny namana. Karazana mainty fohy - fototra tena tsara ho an'ny T-shirt sy ny lokony malaza. Ny vokatra miloko dia mila mifantina tsara kokoa ny ambony, na dia afaka milalao milamina aza ianao.
Short shorts beach
Ny lamaody any Beach dia tsy manan-tsahala ary ny areti-mifindra, noho izany manamboatra garazy ho an'ny toeram-pitsangatsanganana, aza adino ny mividy mozika mahazatra. Izy ireo dia miavaka amin'ny famirapiratan'ny loko, sary sokitra ary famokarana fitaovana haingana. Ny sombin-tsotsotra fohy mena dia aleon'ireo izay efa nahazo sombintsombin'ny saina ary maniry ny hanalokaloka azy amin'ny fomba mahafinaritra. Raha miresaka lamaody isika, dia samy manana ny fomban-dry zareo amin'ny fikajiana ara-panatanjahantena - ohatra, feso. Popularity:
kely izay mandrakotra ireo "mpitaingina batty";
Modely tsara tarehy.
Ireo izay tia ny fomba fanao amin'ny vehivavy sy ny endriny amin'ny endriny dia ho toy ny sokajin'antoka amin'ity taona ity, na bika fohy . Ny fahatanterahan'ity karazana zavatra ity dia toy ny hoe ao anaty akanjonao ianao, ary ao ambadik'izay dia azonao atao ny mahita fa misy kiraro mahafinaritra eo aminao. Ny fiovana izay amoahana ity pentily fohy ity dia samy hafa - izany dia mihatra amin'ny karazana lamba sy ny tapa-kazo.
Ny pantaloons dia azo atao amin'ny vanim-potoana mangatsiaka, raha toa ka vita amin'ny tweed / volon'ondry, na amin'ny fahavaratra, raha chiffon / cotton / silk / linen. Fangatahana fohy fohy mitovitovy amin'ny loko - palitao, voninkazo, biby , pika. Ho an'ny sary kanto dia modely tsy misy fotony amin'ny mainty, fotsy, beige, fasika na vovoka. Koveta tsara tarehy sy romantika.
Amin'ny akanjo fohy fohy?
Ny shorts dia lohahevitra mahaliana momba ny akanjon'ny vehivavy, izay mila fifantenana tsara ny fiarahany, mba tsy hitadiavana vulgar:
Raha mavesatra ny fehin-kiraro, dia arakaraky ny firoboroboan'ny lamaody farany, ny tendrony dia tokony ho eo akaikiny na malalaka, ohatra, ho an'ny pantsy na bodom-pandriana, miaraka amin'ny flounces, ny soroka misokatra.
Ny fehiloha lehibe, toy ny cuettes, dia mitaky ambony, akanjo manga na lobaka.
Ny fikajika manga fohy dia demokrasia, noho izany dia mahaliana ho an'ny T-shirt mahaliana, T-shirts, anisan'izany ireo fohy. Aza hadino ny fotsy hoditra mandritra ny fahavaratra.
Amin'ny andro mafonja dia tsara kokoa ny mameno ny sary amin'ny jirom-bombe, scythe na modelim-bavaka.
Azonao atao koa ny miaina miaraka amin'ny akanjo lava tsy manam-petra.
Amin'ny vanim-potoana mangatsiaka eo ambany fehiloha dia azonao atao ary tokony hanao akanjo marevaka .
Miaraka amin'ny stilettos, ny jirobe sy ny clutch dia tonga sary nalaza tsara tarehy.
Sary nalaina miaraka amin'ny shorts fohy
Short shorts sy top
Amin'ity vanim-potoana lamaody ity, ny ambony dia mamerina ny toerana ambony, noho izany ny mpamorona dia mamorona modely mahafinaritra amin'ny fomba kazhual, amam-pitiavana ary raharahambarotra. Ny singa top and shorts dia hira iray samihafa, izay mety hahitana ny firindrana tanteraka:
Kely fohy kiraro no mahaliana, na dia amin'ny tendrony tsotra monophony amin'ny bateria aza.
Ny loha dia azo atao amin'ny tendron'ny shorts, feno tsinontsina na tratran'ny tsy fahampian-tsakafo, mikaroka amin'ny lafiny iray.
Misy topika demokratika azo atao amin'ny kiraro avo sy jiro.
Ny tsara indrindra vita amin'ny kuvettes dia tsara indrindra amin'ny lantihy sy lamba jiro.
Ny ankizivavy manana vovobony tonga lafatra dia afaka miezaka mampifandray sombin-tsofina fohy miaraka amin'ny crochet-top.
Kiraro ho an'ny shorts
Ny kiraro isan-karazany, miaraka amin'ny modely fohy, dia tsy fahita firy. Ny fehiloha fohy indrindra amin'ny vehivavy dia tsara indrindra amin'ny mokasinina, kiraro na goateas. Amin'ny maha-safidy azy - mpitsikilo amin'ny sehatra avo. Ho an'ny sarin-dranomasina dia mendrika ny hahazo kapa sasany -gladiateurs , sandals, na slaps. Ny sarin-tsarimihetsika dia mitaky halavoana, fianarana na sehatra. Aza hadinoina ny firavaka mahafinaritra sy ny firavaka masira. Ny shorts fohy amin'ny vanim-potoana mangatsiaka dia mifamatotra tanteraka amin'ny kiraro na kiraro, kiraro kiraro na kiraro maitso.
Tendroka maingoka miaraka amin'ny fika fohy
Miakanjo ao anaty tranokala
Tetezana amin'ny endriky ny biby
Toe-damba amin'ny akanjo ho feno
Trano fitafiana ho an'ny vehivavy
Kitapom-bozaka am-paty ao amin'ny fatin-tsakafo
Fiakanjo Krismasy ho feno
Mijanona amin'ny nofinofy - antony
Garis Guipure ho an'ny Taombaovao
Famantarana ny zazavavy bevohoka
Arcana Tarot amin'ny daty nahaterahana
Ahoana no ahafahako manadio kitapo hoditra fotsy?
Tsy misy tanana
Mitombo ny pomelo?
Garderobe ao amin'ny efitra fandroana
Irina Sheik sy Bradley Cooper
Takelan'ny varavarankely eny ambony tafo
Ny Piramidin'ny sakafo mahasalama
Glioblastoma amin'ny atidohan'ny 4 degre
Dressing graderina amin'ny fomba grika